Mapisarema 10 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Jehovha, mubatsiri wemunhu asina mubatsiri
Akaipa anozvikudza achiti: “Hakuna Mwari” (4)
Asina mubatsiri anotendeukira kuna Jehovha (14)
“Jehovha ndiMambo nariini” (16)
ל [Lamed] 10 Haiwa Jehovha, munomirirei nechekure? Munozvivanzirei munguva dzekutambudzika?+ 2 Munhu akaipa anozvikudza achidzingirira munhu asina mubatsiri,+Asi achabatwa nemazano ake aakaronga.+ 3 Nekuti munhu akaipa anozvirumbidza pamusoro peruchiva rwake+Uye anorumbidza munhu ane makaro;*נ [Nun]Haaremekedzi Jehovha. 4 Nekuzvikudza kwake, munhu akaipa haaedzi kuongorora zvinhu;Mupfungwa dzake anongoti: “Hakuna Mwari.”+ 5 Nzira dzake dzinoramba dzichibudirira,+Asi haatombonzwisisi mitongo yenyu;+Anozvidza vavengi vake vese. 6 Anoti mumwoyo make: “Handisi kuzombozununguswa;*Kwezvizvarwa nezvizvarwaHandisi kuzoona dambudziko.”+ פ [Pe] 7 Muromo wake uzere nekutuka, kunyepa, nekutyisidzira;+Pasi perurimi rwake pakazara matambudziko nekukuvadza.+ 8 Anogaririra akahwandira pedyo nemisha;Ari paakahwanda anouraya munhu asina mhosva.+ ע [Ayin] Maziso ake ari kutsvaga munhu wekuuraya.+ 9 Anomirira ari paakahwanda seshumba iri panzvimbo painohwandira iri.+ Anomirira kubata munhu asina mubatsiri. Paanodhonza mambure ake achiavhara,+ anobata munhu asina mubatsiri. 10 Waanenge abata anokurirwa uye anowisirwa pasi;Uye vasina simba vanowira mumaoko ake.* 11 Anoti mumwoyo make: “Mwari akanganwa.+ Atendeudza chiso chake. Haatombooni zviri kuitika.”+ ק [Qoph] 12 Simukai, haiwa Jehovha.+ Simudzai ruoko rwenyu,+ haiwa Mwari. Regai kukanganwa vasina mubatsiri.+ 13 Nei munhu akaipa asina kuremekedza Mwari? Anoti mumwoyo make: “Hamuzoiti kuti ndizvidavirire.” ר [Resh] 14 Asi panoitika nhamo nematambudziko munozviona. Munotarisa moisa nyaya dzacho mumaoko enyu.+ Munhu anotambudzwa anotendeukira kwamuri;+Ndimi mubatsiri wenherera.+ ש [Shin] 15 Tyorai ruoko rwemunhu akaipa neane utsinye,+Kuti pamunozotsvaga uipi hwake,Hamuzohuonizve. 16 Jehovha ndiMambo nariini nariini.+ Marudzi aparara panyika.+ ת [Taw] 17 Asi muchanzwa chikumbiro chevanyoro, haiwa Jehovha.+ Muchasimbisa mwoyo yavo+ monyatsovateerera.+ 18 Muchatonga zvakarurama nyaya dzenherera nedzevaya vakadzvinyirirwa,+Zvekuti munhuwo zvake wepanyika haazovatyisi zvakare.+
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “Munhu ane makaro anozvirumbidza.”
^ Kana kuti “kuzombodzedzereka.”
^ Kana kuti “munzara dzake dzakasimba.”